Izinto zokuhombisa: Amatye kunye namatye kwi-aquarium | Ngeentlanzi
Izinto zokuhombisa: Amatye kunye namatye kwi-aquarium
URosa Sanchez | | Ii-Aquariums ze-DIY
Los izinto zokuhombisa, njengamatye namatye, kufuneka zithandeke emehlweni kwaye zilungele iintlanzi.
Injongo yokuvelisa kwakhona imeko emnandi kunye nokuthintela ukuba izinto zokuhombisa aziyithinteli Ukuhamba ngokukhululekileyo kweentlanzi. Asifanele silibale ukuba izinto kufuneka zilungelelaniswe nobungakanani be-aquarium kunye nobungakanani babemi bayo.
Phakathi kwamatye kunye namatye aguqulelwe kwi-aquarium enemisebenzi yokuhombisa esiyifumanayo, kuqala kwiinto zonke umqala, ezisetyenziswe ngobulumko kwaye zisasazwa ngokufanelekileyo ziyathandeka ngamehlo kwaye zisebenza njengezinto zokugcina.
Kuyenzeka ukuba usebenzise iziqwenga zamatye zohlobo olucekeceke eziyinxalenye yamawa kwiindawo ezithile zonxweme lolwandle, kuba ukumila kwazo okwahlukeneyo kuyathandeka kakhulu kwaye nemingxunya abahlala beyivelisa ayiyiyo inkunkuma kwaye ayibonisi bungozi kwintlanzi.
Las amatye eentaba-mliloZidume kakhulu kodwa ngenxa yokuba inesidima, kunokwenzeka ukuba ukungcola kuqokeleleke kuzo, okushenxiswa ngokulula ngokususa iliwa elikwi-aquarium kwaye ulicoce ngamanzi.
Amatye kunye namatye anomxholo ophezulu wentsimbi okanye izitulo zelitye lekalika kufuneka kuthintelwe, njengoko oku kuya kuba negalelo kutshintsho lwe Ubundilele bommandla wamanzi.
Amanye amatye okuhombisa abandakanya i-whetstone ebomvu, i-fluorite, imithi enetyuwa, i-quartz kunye nee-schists. Kuyenzeka ukuba udibanise ubuhle kunye nokusebenza kubandakanya iziqwenga zesileyiti, kuba ngelixa zisebenza njengezinto zokugcina, zithandeka kakhulu emehlweni.
Xa kufakwe amatye amakhulu, kuyacetyiswa ukuba baphumle kumatye amancinci ukuze kubekho indawo phakathi kwelitye elikhulu kunye nomgangatho we-aquarium. Oku kuya kuququzelela ukujikeleza kwamanzi kwaye kuya kunceda ukuthintela ukungcola okungaphezulu ekuqokeleleni, ukuququzelela Ukucoca i-aquarium.
Akukhuthazwa ukusebenzisa iigobolondo zolwandle ezinemiphetho erhabaxa enokwenzakalisa iintlanzi, ngakumbi iintlanzi zamanzi amdaka ezingasetyenziselwa ukubakho kwezi zinto kwindawo yazo yokuhlala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ii-Aquariums ze-DIY » Izinto zokuhombisa: Amatye kunye namatye kwi-aquarium
Ukunyamekela iintlanzi zePhondo
Ilivo leentlanzi zeKoi